“ချစ်စရာ့အရွယ်” (ဓာတ်ပုံပြပွဲ -၂) 2012 June | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Photography » “ချစ်စရာ့အရွယ်” (ဓာတ်ပုံပြပွဲ -၂) 2012 June
“ချစ်စရာ့အရွယ်” (ဓာတ်ပုံပြပွဲ -၂) 2012 June
Posted by ムラカミ on Jun 27, 2012 in Photography | 148 comments
Mandalay Gazette Photoshow
1). f/5 1/100s ISO 200
2). f/4.5 1/30s ISO-200
3). f/5.2 1/250s ISO = 160
4). f/2.8 1/121s ISO-100
5). f/3.8 1/58s iso = 200
6). f/4.2 1/60s ISO-400
7). -, -, –
8).f/ 2.8 1 / 1300 s ISO-100
9).f/ 2.8 1/250 s ISO-195
10). f/8 1/250 s ISO: 200
11). -, -, –
12).f16/5 1/60 s ISO – 200
13). f/5.6 1/60s ISO100
14). f/5 1/108s ISO-200
15). f/7.1, ISO 200, 1/100s
16). f/5.6 1/250 iso -100
17). f/4.8 1/95s ISO 80
18). f/2.8 ,1/100, ISO 100
19). F/41/250S ISO – 500
20). f/3.5 1/60s ISO-400
21). f/ 6.3 1/250s ISO-100
22). f/2.7 1/30.s iso-400
23). F-5.3-1/25 ISO-100
24). f/5.6 1/320 ISO-200
25). f/4.8 1/80s ISO-800
26). f/2.8, 1/40 s ISO-100
27). f/5.6 1/320s ISO-200
28). f/5.6 1/200s ISO-200
29). f/5 1/60s iso-200
30). f/3.1 1/70s ISO_200
31). f/8 1/640s ISO -200
32.) f/3 1/340s ISO-100
33). f/5.6 1/125s ISO-200
34). f/5 1/80 s ISO – 100
35). F / 5.6 1/60sec ISO – 400
36). F 6.3 1/640s ISO 200
37) f/7.1 Speed 1/125 ISO-640
no5ကို ကြိုက်တယ် ဗျို့
နံပါတ် ၂၄ ကိုကြိုက်တယ် … ။ ဘယ်သူရိုက်တာလဲတော့မသိဘူး … ။
ဓါတ်ပုံပညာတော့ နားမလည်ပါဘူး .. ဒါပေမယ့် .. အဲ့ဒီပုံလေးကို ကြည့်ရတာ .. အတန်းစားခွဲခြားစိတ်မရှိတဲ့ကလေးငယ်ရဲ့ ….. ပွင့်လင်းတဲ့ အပြုံး ၊ ပျော်ရွှင်ပြီး အရောင်လဲ့နေတဲ့ မျက်လုံးလေးရယ် …. လမ်းပေါ်ကခွေးအမျိုးစားလေးကို … ကရုဏာသက်တဲ့ လက်တွေနဲ့ ဖက်ထားလို့ရယ် … အရမ်းနှစ်သက်မိပါတယ် … ။
ko htet says:
ကောင်းပါတယ် အားလုံး ကလေးတွေကနောင်လာမယ်တိုင်းပြည်ရဲ့ အနာဂတ်လေး
ဝေး … ဒီတခါဗုဒ် ထားတဲ့ ပုံ ထိပ်ဆုံး အပြတ်ရောက်နေပါသည်… :grin:
၃၁ နဲ့ ၃၂ အကြိုက်ဆုံး
ဟား ဒီတစ်ခါ ပုံတွေက မနည်းဘူးဗျို့ သေချာစဉ်းစားပြီးမှ ဗုတ်တော့မယ်
အရင်တစ်ခါ ဆုရထားတဲ့သူတွေ မစားရသေးဘူးနော်
နေတော့ကောင်းမယ်ထင်ပါရဲ့ အစ်မ ရယ်။
တဗြဲဗြဲ နဲ့ ရင်ဘတ်ထုထုပြီး ငို ရလွန်းလို့ မော သွားတာနေမှာ။ အဟတ်။
၁) DoF ပိုမို shallow ဖြစ်လျင် ပိုကြွမည်ထင်ပါသည် f/2.8 ကိုပဲ ကျနော် မျက်စိစွဲနေလို့လား မသိပါ
၂) ထူးထူးခြားခြား မရှိလှသောပုံ တစ်ပုံပါ။ အောက်ဒိုး ဖြစ်လျင် ပို ကောင်းမလား လို့တွေးမိပါသည်။
၃) action ပါသော ပုံ ဖြစ်ပါသည်။ ဆပ္ပဂျက် အရိပ်ထဲရောက်နေတာ ကိုတော့ သိပ်မနှစ်သက်ပါ။ ဖလက်ရှ် များ ဖိုင်းယားလိုက်ရင်
၄) ကြီးမားကြည်လင်သော မျက်လုံးများက သည်ပုံ၏ ဆွဲဆောင်မှုဟု ထင်ပါသည်…။ အပြစ်ကင်းသော စူးစမ်းသော ကလေးငယ်တယောက်
၏ သရုပ်ကို ပေါ်လွင်အောင် အမိ ဖမ်း ထားနိုင်ပါသည်… ဗယာကြော်ပါ။
၅) ရိုက်ချက် နှင့် ခံစားမှုပေါ်လွင်မှု .. mood ကို အမိဖမ်းမှု ကောင်းမွန်ပါသည်။ သို့သော် ဆပ္ပဂျက်၏ မျက်နှာထား ကို မနှစ်သက်ပါ။
၆) အကျအန ပိုစ့်ပေးထားသော ပုံ ဖြစ်ပါသည်။ ရိုက်ချက် ကောင်းမွန်ပါသည်။ candid ဖြစ်လျင် အတော် အသက်ဝင်မည်လို့
၇) ပုံဟောင်းပေမယ့် ပုံကောင်းလေး တစ်ပုံပါ…မကြာခင်ပြန်မြင်ရဖို့ ရှိသော ပက်ပစီ ကို မြင်ဖြစ်ပါ၏ ။ ဒေတာမရတာတော့
၈) ထူးခြားမှုမရှိပါ…။ ဘယ်ဘက်ခြမ်း နည်းနည်းထပ်ကပ်လိုက်ရင် ခြံစည်းရိူး တူရူ ရနိုင်တဲ့ပုံပါ …။ လိုကေးရှင်း အသားပေးသင့်တယ်
ထင်မိပါတယ်… f/2.8 1/1300s ကသိပ်လုံလောက်တယ် မထင်မိပါ။
၉) အလုပ်စားပွဲ ထင်ပါတယ်… အပေါ်စီးက မို့ မြင်ကွင်း အနည်းငယ် ဆန်းပါတယ်။ ကလေးလက်ထဲက ဓားကတော့ အသည်းယားစရာပါ။
၁၀) ဒီပုံကတော့ …. အင်း … မကြိုက်ဆုံးပုံပါပဲ …။ Street Photography ဆြာ့ဆြာကြီး တယောက် ပြောဖူးတာပါ…။ သူက ၅၀မမ နဲ့ ကို ပါးဖြဲနားဖြဲ
ဆော်တာပါတဲ့ … ထိုဆြာ့ဆြာကြီးရဲ့ စကားကို လက်ဆင့်ကမ်းတဲ့ ဆြာ ကတော့ ၁၀၀မမ ပါတဲ့ …။ ကျနော်က ၂၀၀၀န်းကျင် ကို သဘောကျသူ ပါ…။
ဖလစ်ပ်အောက် လုပ်လို့ရတဲ့ မော်နီတာပါတဲ့ ဒီ- ကိုင်ထားပြီး သည်လောက်ပဲ ရခဲ့တာ … ရင်ထဲမကောင်းလှပါ…။
၁၁) နောက်ထပ် ပုံဟောင်း ၁ပုံပါ … သာမန် မှတ်တမ်းပုံ ၁ပုံဆိုတာထက် ဘာမှမပိုပါ
၁၂) မထူးခြားတဲ့ပုံ ၁ပုံပါ …ဆပ္ပဂျက် ၂ခုထက် ၁ခုတည်း သုံးရင် ပို အားကောင်းမလားပဲ …။ ဒါမှမဟုတ်လည်း ဆပ္ပဂျက်၂ခုကြားက
ဆက်နွယ်မှုကို ပိုမို ဖော်ပြနိုင်ရင် ပိုကောင်းမှာပါ…။
၁၃) သနပ်ခါး ကသဘောကျစရာပါ.. ဆပ္ပဂျက် ဆံပင်ရှည်ရင် မြန်မာအင်္ကျီနဲ့ ဆိုရင် ပိုကောင်းသွားမလားပဲ ။
၁၄) ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မှု ပိုင်း လိုအပ်ချက်ရှိတယ် လို့ မြင်ပါတယ်။ ပုံရိပ်ပြတ်သားမှုလည်း လိုအပ်ချက် ရှိနေပါတယ်။ shutter speed
၁၅) လမ်း တူရူ ပြထားပုံလေး နှစ်သက်စရာကောင်းပေမယ့် ဆပ္ပဂျက် များနေတာ စူးစိုက် စိတ်ဝင်စားမှုဂုဏ်ကို လျော့ကျစေပါတယ်
သာမန်ထက်မပိုဘူး လို့ပဲ မှတ်ချက်ချမိပါတယ်။
၁၆) နောက်ထပ် အက်ရှင် ပါတဲ့ ပုံတစ်ပုံပါပဲ … ။ အရိပ်ထဲရောက်နေတာ နည်းနည်း အားမရဖြစ်မိတယ်… ရှေ့၁လှမ်းထွက်လိုက်ရင်
နေရောင်ထဲ ရောက်မလို ခံစားချက်ကိုလည်း ပေးပါတယ်။ (ကျနော်ကတော့ ရောက်လိုက်စေချင်မိပါတယ်)
၁၇) ကိုရင်လေးတွေ ကို နောက်က အရုပ်အတိုင်း ပိုစ့်ပေးခိုင်းပြီး ရိုက်ထားတဲ့ အိုင်ဒီယာလေး တခုကလွဲရင်
ကျန်တာ ဘာမှ အထွေအထူး ပြောစရာမရှိပါ ။ မဆိုးဘူး ဆိုတာထက် မပိုပါ..
၁၈) လက်ရာကောင်းလေးပါ..။ အက်ရှင် အမိအရ ဖမ်းယူထားနိုင်ပါတယ်.. ရုပ်လုံးကြွမှု မှာလည်း f/2.8 မို့..
ပြောစရာ မလိုတဲ့ ပုံပါ…။ တခုလေး ဝေဖန်ချင်တာတော့ cropping ပါပဲ .. ။
၁၉) ဒီပုံရဲ့ ဖွဲ့စည်းမှု ကို သဘောကျပါတယ်..။ဘယ်ဘက် အပေါ်ထောင့်ကနေ ညီမ(အထင်) ကို ငုံ့ကြည့်နေပုံ ..က
အသက်ဝင်ပြီး ..ညီမလုပ်သူ က ညာဘက်အောက်ထောင့်ကနေ ပိုစ့်ပေးနေပုံလေးက နှစ်သက်စရာပါ …တိုင်းရင်းသား
၀တ်စုံနဲ့မို့လည်း တမျိုး စွဲဆောင်မှု ရှိနေပြန်ပါတယ်။ ဘယာကြော်ပါ…။ ကျနော်ကပဲ tight crop ကြိုက်သူမို့..လား မသိပါ…
ကျစ်လစ်တယ် လို့ ခံစားရပါတယ်။
၂၀) ဒါလည်း နောက်ထပ် ပုံကောင်းလေး တစ်ပုံဖြစ်ပါတယ်။ ဆံပင်တွေ အပြည့်ပါရင် ပိုကောင်းမလား ပဲ ….။ နောက် နည်းနည်း
red-eye ၀င်ချင်နေသလို လို … ခြုံကြည့်ရင်တော့ လက်မောင်း ရင်းက မွေးညင်းလေးတွေပါ ပေါ်အောင်ရိုက်ထားနိုင်တဲ့
၂၁) သည်ပုံလေးလည်း ကောင်းပါတယ်..။ ရုတ်ချည်း ဖြစ်လာတဲ့ အပြစ်ကင်းစွာ ပျော်ရွှင်တဲ့ ပုံရိပ်ကို အမိဖမ်းထားနိုင်တာ
နှစ်သက်စရာပါ ..။ cropping ပိုင်းကတော့ (ဖြတ်ထားတယ် မထင်ပါ) အားနည်းချက်ရှိနေပါတယ်။
၂၂) သာမန်ထက်မပို ဘူး လို့ ခံစားရပါတယ်။ ရိုးရှင်းတဲ့ မှတ်တမ်းပုံတစ်ပုံပါ…။
၂၃) အပူအပင်ကင်းကင်း အိပ်ပျော်နေတဲ့ ကလေးငယ် ပုံ မို့ နှစ်သက်မိပါတယ်။ croppingလေး ကောင်းပါတယ်… အိပ်နေတဲ့ကလေးနဲ့
အပြိုင် နောက်ကွယ်က ဖက်လုံး ပါအောင်ရိုက်ထားတာလည်း နှစ်သက်စရာပါ..။
၂၄) သည်တလ အကောင်းဆုံး တွေထဲက ၁ပုံလို့ ထင်ပါတယ်.. တပိုင်းတစ ပျက်ပြယ်နေတဲ့ သနပ်ခါး တွေက .. သဘာဝ ကျမှု ကို
သက်သေခံနေပါတယ်… ။ ဘယာကြော်ပါ…။ ဘယ်လောက် ဝေးဝေးကနေ ဆွဲရိုက်ထားတယ်ဆိုတာလေး ပါ သိရရင် သိချင်သား…။
(သိပ်ကပ်မယ်ဆို ရင် သည်လို သဘာဝကျတဲ့ mood ရမယ် မထင်လို့ပါ)
၂၅) ဒါလည်း အကောင်းဆုံး တွေထဲက ၁ပုံ ပါ ။ ဟုတ်ပါတယ် ဓာတ်ပုံဟာ ..အမြဲတစေ .. ရေပြင်ညီအတိုင်း ရိုက်ရမယ် လို့ မဆိုလိုထားပါဘူး။
ကွဲပြားတဲ့ ချဉ်းကပ်ဟန် အတွက်ရော ..အလင်းအမှောင် အယူအဆအတွက်ပါ.. ဘယာကြော်ပါ။
၂၆) ကလေး ပိုစတာ တွေထဲမြင်ရလေ့ ရှိတဲ့အတိုင်း ရိုက်ထားတယ် ထင်ပါတယ်… red eye ၀င်နေပါတယ်…. flash ပစ်ထားပုံလည်းရပါတယ်..။
ကောင်းလား မေးရင်တော့ မဆိုးဘူး နဲ့ ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ ကြား လို့ ပြောချင်ပါတယ်…။
၂၇) vignetting ကို ပြေပြေလေး ထည့်ထားတာ တွေ့ရပါတယ်.. အဲ့ဒါကို က စွဲဆောင်မှု ရယ်..။ ချစ်စရာ့ အရွယ် ဆိုတဲ့ ခေါင်းစီးဟာ ..ပျော်နေတာ
ရယ်နေတာ ဆော့ကစားနေတာကိုမှ ရိုက်ရမယ် မဆိုလိုထားလို့ ..ချစ်စရာ့အရွယ်ရဲ့ စိတ်ကျဉ်းကျပ်မှု ကိုဖော်ပြထားတဲ့ ပုံမို့ ကွဲပြားစွာ
နှစ်သက်ရပါတယ်…။ ပုခက်ခြင်းခေါ်မလား ..အဲ့သည့်ထဲကနေ ကိုယ့်ခြေထောက်ကိုယ် ကိုင်ပြီး ငေးငူနေတဲ့ ကလေးငယ်ဟာ ဂရုဏာရသ ကို
ပေးတယ်လို့ မြင်မိလို့ပါ …။ ပုံကောင်းလေးပါ. .ဗယာကြော်…
၂၈) သိပ် ထူးခြားမှု မရှိတဲ့ ပုံ တစ်ပုံပါ .. ပန်းနဲ့ အင်္ကျီအရောင် ဟပ်သွားတာကတော့ နှစ်သက်စရာပါ။
၂၉) ပုံဟောင်း တစ်ပုံပါ …။ Meta Data ရထားတာလေးတော့ ..သဘောကျမိပါတယ်… မွေးနေ့လက်ဆောင် ပါဆယ်ထုပ်တွေ
ဖောက်ရင်း အဲ့သည့်ကြား ၀င်ရိုက်တယ် ထင်ပါတယ်…။ ပြေပြစ်တဲ့ ပုံ မပေါက်ဘဲ အမှိုက်ပွနေတယ် ခံစားမိပါတယ်။
၃၀) ထီးတစောင်းလေးမို့ … ကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ ပုံပါ …. နှစ်သက်စရာ ကောင်းပါတယ်… ။ crop လည်းကောင်းမွန်ပါတယ်။
၃၁) လက်ရာပိုင်း အရ အကောင်းဆုံး ပုံ လို့ထင်ပါတယ်… ကျနော်အလွန် နှစ်သက်တဲ့ ပုံပါ ..။
စာဖတ်သူ အတော်များများလည်း ထပ်တူကျ လိမ့်မယ် မှတ်ပါတယ်…။ ဝေဖန်ရရင်ဖြင့် ..သည်ပုံဟာ
ကလေးကိုဇောင်းပေးပြတာမျိုးတော့ မဟုတ်ဘူး … travel ပိုင်းဘက် ပိုရောက် သွားသလို ခံစားရပါတယ်….။
အတတ်ပညာပိုင်း ကောင်း ..(အလွန်ကောင်း) လို့ သတ်မှတ်ချင်ပီး ခေါင်းစဉ်နဲ့ လိုက်လျောညီထွေ ဖြစ်မှုပိုင်းမှာတော့
သင့် … လို့ သတ်မှတ်ချင်ပါတယ်….ရွာထဲမှာ သည်လိုလက်ရာရှင်မျိုး ရှိတာ သိရလို့ ၀မ်းသာ ဂုဏ်ယူမိပါကြောင်း…။
၃၂) သည်ပုံက မူလတုန်းက အောက်ခြေမှာ ကဗျာကလေး တစ်ပုဒ်ပါပါတယ်..။ မူနဲ့ မညီလို့ ဖြတ်ထုတ်ပြီး
တင်လိုက်ရတာပါ…မှတ်မိသလောက် ပြောရရင်(စာသား မတူ) အနိမ့်အမြင့် အသားအရောင် မတူဘဲ ကွဲပြားတဲ့
ချစ်စရာ့အရွယ် ၂ခု ကို ဖော်ကျူးတယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်.. ဖိုတိုအက်ဆေး အတွက် သုံးတတ်တဲ့ ပုံမျိုးပါ…။
၃၃) ပိုစတာ ရှေ့ မှာရိုက်ထားတာ မို့ တမျိုး အမြင်ဆန်းပါသည်။ ဆပ္ပဂျက် သည်ဘက်လှည့်ကြည့်နေပါက ပိုမို ကောင်းမည်ထင်ပါသည်..။
၃၄) တစောင်း ဖြတ်ထားတာလေးနဲ့ အနီးကပ်ဆွဲထားတာလေးက သဘောကျစရာပါ..
၃၅) အလင်းအမှောင် သည့်ထက် ပိုအားကောင်းလျင် ပုံပိုကောင်း မည် ထင်ပါသည်…။
၃၆) သည်ဆြာ့ လက်ရာကိုတော့ ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်… ပစ်ဇယ်လ် တအားကျနေတာ ..ကျနော် လည်း နားမလည်ဘူးဗျာ..
မူရင်းပုံတုန်းက ဆိုက်ဇ် မဟုတ်တာပါ … ကျနော် အကောင်းဆုံးလို့ ထင်တဲ့ ပုံတချို့ထဲက ၁ပုံလို့ ဆိုပါရစေဗျ….။ ဓါတ်ပုံပညာ လေ့လာသူတွေ
အတွက်တော့ သည်မှာ shutter speed အမြန်သုံးထားတာ ..ဆပ်ပြာပူပေါင်းတွေကို freeze လုပ်ဖို့ ဖြစ်ကြောင်း …လက်တို့ချင်ပါတယ်..။
၃၇) ကျနော် မေ့ကျန်ခဲ့လို့ နောက်မှ ပြန်တပ်ရတဲ့ပုံပါ … ကလေးတွေ မြန်မာဝတ်စုံနဲ့ ဘုရားပေါ် မှာ ရိုက်ထားတဲ့ ပုံဆိုတော့ ..ရှင်ပြု အလှူ
မှတ်တမ်းပုံကောင်းလေး ပါလို့ ပဲ မှတ်ချက်ပေးချင်ပါတယ်…။ တူရူ ချဉ်းကပ် မှု လေး သဘောကျပါတယ်။
မောဘီအေ …. ကိုယ့်ဆြာတွေကလည်း ဘယ်ပျောက်နေတယ်မသိ…
သများ မောဘီ ..
ဘယ်သူဘယ်ပုံ ဘာညာ ..ရေးဦး..
ညည်းကို အကောင့် ပါ့စ်ဝါ့ဒ် ပေးထားတာပဲ..
ဗျို့ .. ကလုလင်
လက်ချောင် ကိစ္စလေး …လုပ်ပါဦးဗျာ.
ဗျို့ ..ကမှော်နဲ့ တကွ ..အခြား ဆြာတွေ..
မှတ်ချက် လေးတွေ သုံးသပ်ချဉ်းကပ်တာလေးဒွေ လုပ်ကြပါဦး
ဒါကြီး ညန်ညန် ဖြုတ်မယ်လေဂျာ …
နောက်တပါတ် …နှလုံးသားရှိတဲ့အရပ် ကို အာဂန္တုကြွမယ်ဗျို့…
အာဂန္တုကြွမယ်ဆိုရင် နှလုံးသား မရှိတဲ့ ဆန့်ကျင်ဖက် အရပ်ကို ကြွရမှာ မှားနေမှာစိုးလို့
မွန်ကစ် ပုံလေးကို ဗုတ်ပေးထားသူ လေးဦးကို ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ရှင်..
ပထမ ပြပွဲဓါတ်ပုံ တုန်းက သာမန် လက်ရာအဖြစ် သုံးသပ်ခံခဲ့ရပေမဲ့ ယခု ပြပွဲဓါတ်ပုံမှာတော့ ဦးဂီရဲ့ ဗယာကြော် အဆင့် တိုးမြှင့် ချီးကျူးခံရလို့ ဆုရသလိုဘဲ ၀မ်းသာကျေနပ်မိပါတယ်ရှင်.. ရုံးပိတ်ရက် အိမ်မှာ အားနေရင် တူမလေးနဲ့ အလှဓါတ်ပုံလေးတွေ ရိုက်တတ်ကြပါတယ်.. ပုသိမ်ထီးလေးနဲ့က မွန်ကစ် တူမလေးပါ… ပြပွဲ နဲ့ အကျုံးဝင်သွားလို့ ၀င်ပြဖြစ်သွားတာပါရှင်…
နောက်ပြပွဲ “ဘ၀” ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ပြပွဲ ၀င်နိုင်အောင် ဆက်လက်ကြိုးစားပါ့မယ်လို့…
လက်ကလည်း အထက်ကပုံကိုဆွဲလိုက် အောက်ကစာကိုအပေါ်တင်လိုက်နဲ့
သဘောကျတာတွေများနေတယ်။ ဆြာဂီလိုတော့ တက်ကနစ်တွေ မသိဝူး။ အမြင်အရကြိုက်တာက
ပုံလေးတွေအကုန်လုံးက ချစ်စရာလေးတွေကြီးပဲ ချစဖို့ကောင်းတယ်နော်
Hi, Guys.. I like No.17 photo. Everything OK my lovely villagers?
I can’t type Myanmar font in my computer. Sometime i miss u all. Take care
I will be come back soon. See u.
Koyin Sithu (In Red Sea)
ဒီပြပွဲက မပိတ်သေးဘူးလားဟင်။ July လ၀က်တောင်ကျိုးတော့မယ်။ နောက်လအတွက် ခေါင်းစဉ်ပေးပြီးသွားပြီလား။
ခေါင်းစဉ်က “ဘဝ” တဲ့။ :-)
“ဘဝ” ဆိုတဲ့ ခေါင်းစီး က အရမ်းကျယ်ပြန့်နေတယ်ေ်နာ် .. ဘာဘ၀ကိုရိုက်ရမှာ.. ကလေးဘ၀လား.. ဆိုက်ကားဆ၇ာဘ၀လား.. မြင်းလှည်းဆရာဘ၀လား.. သုဌေးဘ၀လား.. ဆင်းရဲသား လက်လုပ်လက်စားဘ၀လား.. ကြွက်ဘ၀လား.. နွားဘ၀လား.. အရမ်းကျယ်နေတယ်နော်..နဲနဲ ချုံ့လိုက်ရင်ကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်..
ကဲကဲ .. ကြေညာ ပါဗျို့  .. လက်ဆောင် ပေးဖို့ .. အဆင်သင့် ဖြစ်နေပြီ ဆိုတာလေး …….. ….. ဒီလ အတွက် လူကြိုက်အများဆုံး ပုံ ၃ ပုံအတွက် memory stick ၃ ချောင်းပါ။ price များများ မပေးနိုင်ပေမယ့် …. value ကောင်းကောင်း နဲ့ အမှတ်တရ ဖြစ်နေစေဖို့ ….. ပါ။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျို့  …….
ဟုတ်ပါတယ်ဗျို့ …… ဘယ်နေ့နောက်ဆုံးဗုတ်ပိတ်တယ်ဆိုတာလည်းမပြောမကြေငြာပါလားဗျို့ .. ဦးသွားချီးလည်း ဘယ်ပျောက်နေလဲဗျို့ ……. ကလေးပုံလေးတွေတင်ထားတာတော့ ကောင်း ပါတယ် …. ဒါပေမယ့် ပြပွဲအဆုံးအဖြတ်လေးတော့ လူတွေကသိချင်နေမှာပေ့ါနော် ……
ဓာတ်ပုံအတွက် ဆုပေးတာချိုဒေါ့ memory stick ထက် memory card ဆိုရင် ပိုမကောင်းလား ဓာတ်ပုံသမားဆိုတော့ card ကိုပိုလိုမှာ ပေါ့နော်..
ဟေ့လူ ၀ယ် ပြီး နေပြီ ….. ခုမှ လာပြီး …. နေ ကို သူ့ ဘာသာ သူမနေ ခိုင်း ဘဲ လိုက် အုပ် နေ .. လိုက် ကာ မနေ နဲ့ တော့ ….
လုပ်လိုက်ဟ.. တော်ပါပေ့ အရေးအသား
ကလေးလေးတွေရဲ့ ဖြူဖြူစင်စင် ပုံလေးတွေပါ…
ကိုယ်ချင်းစာနာမှုရှေ့ထားပြီး မဲမရသေးတဲ့ ၆ က ပို့စ်ပေးနေတဲ့ သားလေးကို Vote လိုက်ပါတယ်။
ပုံ ၂၄ ကို အကြိုက်ဆုံးပါနော်။ အသက်ဝင်လွန်းလို့။
ပိတ်မယ့် ပိတ်တော့ … အမြန်ဆုံး ပိတ်ချင်တယ်ဗျို့  ….လက်ဆောင် က လဲ အဆင်သင့် … ဖြစ်နေပြီ။
ဒီနေ့ က 16 ရက်ဆိုတော့ 17 – July – 2012 အင်္ဂါနေ့ ပိတ်လိုက်မယ်ဗျို့ ။
သူကြီး ပိတ်မယ် ထင်လို့ ပါဗျာ …..။
အော် ကျနော်က သူကြီးမပိတ်သေးတာမှတ်တာ.
ကျနော်ကတော့ ကင်မရာကို မကြည့်တဲ့ပုံလေးကို ဗုတ်တယ်ဗျာ
ပုံလေးတွေ အရမ်းလှလို့ နောက်ပြိုင်ပွဲတွေ ရှိရင် တစ္ဆေလေးကို ပါဝင်ခွင့်ပြုကြပါနော်
လူကြိုက်အများဆုံး ပုံတွေ အတွက် ဂုဏ်ယူပါတယ်ဗျာ။ ဒီလ မှာ တတိယ က နှစ်ခု ဖြစ်နေလေတော့ … တစ်ပုံ ရွေးလိုက်ရတယ်ဗျာ .. အဲဒါလေး နားလည် ပေးပါနော်။
၁ ။ ဂန္ဓာရီ ဆြာအုပ် ပုံ နံပါတ် (၃၁) ပါ။ အင်းလေး မှာ လို့ ခန့်မှန်း ရပါတယ်။
၂။ ဘာဘီကျု တဲ့ .. ရွာသားမဟုတ်ဘူး လို့ခန့်မှန်း ရပါတယ်။ ပုံနံပါတ် (24) ပါ။ နဲနဲ တော့ ပြောလိုက်မယ်…။ သိနေတယ် လို့ .. အဲဒါလေးပါ။
၃။ ရဲစည် ပါ။ ပုံ နံပါတ် (၄)ပါ။ …
အဲဒါ .. ကျေးဇူးပြုပြီး အဆက်အသွယ် လုပ်ကြပါဦးလို့ ..
ဒုတိယ အကြိမ် တော့ ပြီးဆုံး သွားပါပြီ …။
အဆက်အသွယ် လုပ်ကြပါဦးချိုတော့ ဘယ်ရို အဆက်အသွယ် လုပ်ရမှာရဲ..
တပါတ်ပြည့်ကတည်းက ဖြုတ်ပါ ဖြုတ်ပါဆို..မဖြုတ်ဝူး ….
ပီး ..ခပ်တည်တည်နဲ့ လာမေးနေတယ်…
သများ ခရီးသွားနေတာပါရှို ….
နောက်လ ဘာဆက်လုပ်မှာတုန်း ဆြာတို့ …
(ကမှော်ရီး ကလည်း …တင်မယ် ဆိုပီး မတင်သေးဝူး)
ခေါင်းစဉ်ရော အစီအစဉ်ရော … ဘာမှန်းသာ …မသိသေးတာ
ပို့သူက ပို့ကုန်ဘီ ….
နောက်ခေါင်းစဉ်ကို အားမာန် လို့ ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ
ကြိုးစားမယ့်သူတွေ ကြိုးစားလို့ ရပါပြီ…
ကျွန်တော် မှော်ဆရာမှ မန်မိုရီစတစ်တစ်ချောင်း လက်ဆောင်ပေးအပ်သွားပါမယ်လို့..
ပထမဆုအတွက် ကျွန်တော် မှော်ဆရာမှ မန်မိုရီစတစ်တစ်ချောင်း လက်ဆောင်ပေးအပ်သွားပါမယ်လို့..